Ethiopian Aggression in Somalia
ISRAACA PEACE RALLY
3:00- 5:00PM ( after Jum’ah prayer)
1201 Pennsylvania Ave, NW #300
Caalami Ah uu Horseedayo Ururka Israaca
Waxaa la ogeysiinayaa dhammaan dadweynaha Soomaaliyeed ee ku sugan Waqooyiga Amerika in ururka ISRAACA (Pan-Somali Council for Peace and Democracy) uu qaban doono banaabax looga hortagayo xadgudubka iyo faragelinta xaq darrada ah ee dowladda Ethiopia ku hayso ummadda iyo dalka Soomaaliyeed. Waxaan shaki ku jirin in ay khilaafaad iyo is-dulun (dulum) sokeeye badan weli ka jiraan Soomaaliya, hase yeeshee, waxaa maanta caddaatay in maamulka Ethiopia uu go’aansaday in uu ka fa’ideysto kala jajabka Soomaali-weyn oo uu dab kasta oo sii damayo ey dib u holciyaan si eysan qarannimo Soomaaliyeed marna u suuroobin.
Ciidamada Ethiopia waxay si xad-gudub ah u soo galeen dhulal badan ee Soomaali, waxeyna si fool xun uugu xadgudbeen xuquuqda shacabka Soomaaliyeed ee dagan dhulalkaas, iyo sharafta qarannimada Soomaliyeed.
Israacu wuxuu ku guubaabinayaa dhamaan wax-garadka Soomaaliyeed in ay aqoonsadaan oo ey shaacana ka qaadaan mu’aamaradda dowladda Ethiopia ee hadafkeedu yahay in si kasta oo suuragal ah- xaq ama xaq darro- ey isku hortaagto dib-u-dhiska Qaranka Soomaaliyeed.
Ugu-dambeyntii, Israacu wuxuu ka codsanayaa dhamaan Soomaalida nabadda jecel ee qadirisa xornimada, qarannimada, mustaqbalka iyo maslaxada guud ee Soomaaliyeed (yar iyo weenkood) in ey iskaashadaan, oo si wadajir ah uuga hortagaan faragelinta xadgudubka ah ey Ethiopia ku heyso ummadda Soomaaliyeed ee weli u taaktaaksaneyso
Qarannimo iyo dib-isu-dhis.
Xaggee: Safaaradda Ethiopia ee Washington, DC
Goorma: 3:00-5:00 Galabnimo, maalinta Jimcaha 1/26/00 ( Salaadda Jimcaha kaddib)
Address: 3506 International Drive, Washington, DC 20006
Wixii Tafaasiil ah, fadlan la xiriir ururka
(Pan-Somali Council for Peace and Democracy)
Telefoon: (202) 661-4653